मृगौला पिडित नेपालीलाई सहयोग गर्न एकदिने अभियान – Shuva News
मृगौला पिडित नेपालीलाई सहयोग गर्न एकदिने अभियान
Shuvanews ३ मंसिर २०७५, सोमबार 204 Views
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ९ पार्वती टोल निवासी दुवै मृगौला विग्रीएर उपचारको पर्खाइमा रहेका डिलबहादुर सार्की (नेपाली)को उपचारको लागि एकदिने सहयोग संकलन अभियान गरिने भएको छ । राष्ट्रिय भूमि अधिकार सञ्च कास्कीको आयोजनामा मंसिर ४ गते कार्यक्रम गर्न लागिएको हो ।
सो अभियानबाट संकलन भएको सम्पुर्ण रकम पिडित डिलबहादुरको घरमै लगेर हस्तान्तरण गरिने मञ्चका अध्यक्ष प्रेमबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो । विगत ४० वर्ष देखि पोखरा ९ मा बस्दै आउनुभएका डिलबहादुर नेपालीको उपचारमा सहयोगको लागि पार्वती टोल विकास संस्थाका तर्फबाट आधिकारिक अपिल गर्दै नेपालीको पारिवारिक स्थिति अत्यन्तै दयनिय रहेकोले संघ, संस्था, संगठन, टोलवासी तथा सहयोगी मनहरुलाई सहयोगको लागि आग्रह गरिएको हो ।
२०७५ साउनमा मृगौलामा समस्या देखिए यता उनले पद्म नर्सिङ होम, दिया मेडिकल पछि फिष्टेल हस्पिटलमा उपचार गराई राखिएको परिवारका सदस्यले जानकारी दिएका छन् । हप्तामा २ पटक डायलासिस गर्नु पर्ने र एक पटक डायलासिस गर्दा ८ हजार लाग्ने तथा वेड चार्ज महङ्गो पर्ने भएकोले घरबाटै डायलासिस गर्दै आएको बताइएको छ ।
सरकारी हस्पिटल भनेर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय हस्पिटलमा नाम दर्ता गरेको भएता पनि डायलासिस गर्ने पालो नै नआएको पनि जानकारी दिइएको छ । नेपालीको श्रीमती, ३ छोरी र २ छोरा रहेका छन् । उपचारमा सहयोग गर्न इच्छुकले डिलबहादुर सार्कीको नाममा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पृथ्वीचोक शाखाको खाता नं. ३०२००२३६१०१० मा जम्मा गरिदिन सकिने श्रीमती सुमित्रा सार्कीले जानकारी दिनुभयो । आफ्नै खर्चमा उपचार गर्दै आएका नेपालीलाई हालसम्म पोखरा ९ स्थित पार्वती आमा समुहले आठ हजार रुपैया र पार्वती टोल विकास संस्थाले सात हजार रुपैया आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।